Ahoana ny fomba hanamboarana ny fikirakirana LXDE? | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fikirakirana LXDE?
LXDE dia mbola tontolon'ny birao malaza ihany, na eo aza ny taonany, na dia noho io aza tsy ho afaka hanao backup haingana ianao amin'ny alàlan'ny fanondranana entana ao amin'ny Dconf.
kosa, raha te hitandrina ireo fikirana nataonao tamin'ny tontolon'ny birao LXDE anao ianao, mila mamorona backup feno amin'ny folder ~ / .config izy ireo.
Afaka manao an'ity bakcup ity avy amin'ny LXDE Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny famoronana rakitra voafintina ao amin'ilay lahatahiry voalaza hahafahantsika mitahiry haingana kokoa ity kopia ity.
avy eo Alefaso fotsiny ity baiko manaraka ity hanaovana izany:
Satria rehefa manao an'ity backup ity dia misy ny tontolon'ny tontolo iainana, ary koa ny mpizaha ary ny olana mety misy fampahalalana saro-pady Afaka manampy dingana fiarovana amin'ity kopianay ity izahay, mba hiarovana ireo tahiry voatahiry.
Ity dingana ity dia mety tsy voatery atao.
Amin'izay mba hampiasa ny fitaovana GnuPG izahay, izay azontsika apetraka miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto
Debian, Ubuntu, Linux Mint ary ny derivatives:
Vita ny fisintomana hanatanteraka ny encryption an'ity rakitra ity izahay miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Eto izy ireo dia tsy maintsy mameno ny fangatahana tenimiafina izay hita eo amin'ny terminal azy ireo mba hamenoana ny fizotran'ny encryption.
Amin'izay mba tsy maintsy manome teny miafina tadidiny izy ireo ary tsara. Rehefa vita ny encryption dia hahita backup.tar.gz.gpg ao amin'ny lahatahiry tranonao ianao.
Rehefa avy nampakatra ny backup tamin'ny toerana azo antoka izy ireo dia afaka mamafa ny rakitra .tar.gz izay fototry ny encryption.
1 Lohahevitra sy sary masina voafafa
1.1 Avereno ny backup
Araka ny tokony ho fantatrao ihany koa, ny ampahany amin'ny fanaingoana sy ny endrika hita amin'ny tontolon'ny birao dia ireo lohahevitra sy sary masina, mba hahafahanay mamerina azy ireo amin'ny fomba manaraka.
Tokony ho fantatr'izy ireo fa misy lalana roa mety hasiana azy ireo, izay ny mahazatra indrindra dia ilay ao anatin'ny folder "/ usr" ao amin'ny fakan'ny rafitry ny rakitra. Toerana iray hafa ananan'ny mazàna azy io dia ao anatin'ny fampirimana manokana ao amin'ny "/ trano".
/ usr / share / sary masina y / usr / fizarana / lohahevitra na in ~ / .icons sy ~ / .tema.
Ankehitriny dia ao anaty fisie TarGZ daholo ny lohahevitra sy ny kisary rehetraNy backup dia feno ary ny rakitra voageja dia azo tehirizina ao anaty rahona, USB ny kapila matevina hafa na izay ao an-tsainy hatao amin'izy ireo.
Avereno ny backup
Farany, hahafahanao mamerina amin'ny laoniny ny fikirakira anao amin'ny rafitra vaovao na raha nanapa-kevitra ny hizara izany amin'ny olona hafa na amin'ny solosaina hafa ianao, izy ireo dia tsy maintsy misintona na mampifandray ilay fitaovana izay nitahirizany ireo rakitra voahidy.
Mba hamoahana sy hamoahana ny bakup LXDE dia tsy maintsy soratanao izao baiko manaraka izao:
Izay angatahina aminao ny teny miafina nomena anao. Raha vantany vao voadio, dia hiroso amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny rakitra ao amin'ny lahatahiry tranonao miaraka amin'ny baikon'ny tara izahay.
Aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny fisie fikiranao, esory ny rakitra fisie sy ny rakitra lohahevitra misy tara.
Toy izany koa no ampiasaina amin'ny sary masina
Raha mangataka fahazoan-dàlana izy dia manampy fotsiny i sudo amin'ny fomba manaraka:
Rehefa apetraka ny sary masina, ny biraonao LXDE mila mamerina ny rafitrao ianao ka ny fiovan'ny lahatahiry fikirakirana dia enta-mavesatra amin'ny fanombohana sy ny mpampiasa ny rafitrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hanamboarana ny fikirakirana LXDE?
Bill emia dia hoy izy:
Vaovao tsara momba ny fikirakirana LXDE
Valiny tamin'i Bill Emia
Linux 4.19-rc5: navotsotra tamin'ny tanan'i Greg taorian'ny zava-nitranga ...
SparkleShare: fitaovana ho an'ny fampifanarahana ny rakitra rahona